'Ka Iibso Google-ka' Wuxuu u Furan yahay Dhammaan Ganacsatada | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/'Ka Iibso Google-ka' wuxuu u furmay Dhammaan Ganacsatada
'Ka Iibso Google-ka' wuxuu u furmay Dhammaan Ganacsatada
Shopping Google waxa uu sameeyay isbadalkii labaad ee la taaban karo dhawrkii bilood ee la soo dhaafay. Isbeddelkii ugu horreeyay wuxuu ahaa hirgelinta liisaska wax iibsiga Google oo bilaash ah. Midda labaad waxay furaysaa barnaamijka "Buy on Google" ee dhammaan baayacmushtarka, oo bilaash ah.
Iibka Google wuxuu u ogolaanayaa macaamiisha inay ka iibsadaan baayacmushtarka iyagoon ka tagin Google. Barnaamijku wuxuu u gudbi doonaa dhammaan baayacmushtarka horaanta 2021, sida ay sheegtay Google.
Tixgeli tusaalaha hoose ee habka iibka Google. Kadib raadinta "hard drives", macaamiilku waxa uu geli karaa tabka "Shopping" oo guji ikhtiyaarka Iibka Google.
Kadib raadinta "hard drives", macaamiilku waxa uu geli karaa tabka "Shopping" oo guji ikhtiyaarka Iibka Google.
Riixitaanka liiska ugu horreeya ("Samsung Portable SSD T7" wadista dibadda) waxay soo saari doontaa bogga alaabta. Macaamiishu waxay markaa riixi karaan "Checkout Degdega ah" ama "Kudar Gaariga," gal Google (haddii ayan hore u lahayn), oo buuxi faahfaahinta gaarsiinta iyo macluumaadka lacag-bixinta.
Marka la soo galo bogga badeecada, macaamiishu waxay gujiyaan "Checkout Quick" ama "Ku dar gaariga."
Marka laga reebo in komishanka la'aan yahay, isbeddelada barnaamijka waxaa ka mid ah:
Ku xidhida bixiyaha lacag bixinta ee Xarunta Ganacsiga. Markii hore, ka iibso Google xayaysiiyayaasha waxay isticmaali karaan kaliya PayPal si ay uga baaraandegaan lacagaha laga helo macaamiisha. Shopify Payments hadda waa ikhtiyaar, iyadoo ay jiraan soo-saareyaal lacag-bixineed oo badan oo imanaya. Ganacsatadu waxay u baahan doonaan inay ku xidhaan processor-kooda lacag bixinta iyo Xarunta Ganacsiga.
Si toos ah ula tacaalida taageerada macaamiisha. Google ayaa hore taageero gaar ah u siisay Iibka macaamiisha Google-ka. Weydiimahaas taageerada, sida dalbashada ama dhibaatooyinka dhoofinta, ayaa hadda marka hore aadi doona baayacmushtarka, kuwaas oo ay tahay inay ku bixiyaan ciwaanka iimaylka ku habboon ee taageerada macmiilka ee Xarunta Ganacsiga.
Soo celinta badeecada. Google ayaa ka baaraandegi karta soo celinta macaamiisha, ama ganacsatadu iyagaa samayn kara. Haddi Google sameeyo, baayacmushtarta ayaa ku xidhi doona sidaha rarida ee Xarunta Ganacsiga. Side ayaa markaas si toos ah u dalacsiin doona baayacmushtarka.
Quudinta alaabta Amazon. Isbeddel kale ayaa ah awoodda lagu dhejiyo quudinta badeecada isla Amazon ee Xarunta Ganacsiga. Google ayaa si toos ah u khariidad doonta goobaha Tani waa qiimo-kordhin weyn oo waayo-aragnimadayda ah, maaddaama cilladaha quudinta-farsamada ay noqon karaan kuwo adag.
Macaamiisha wax ku iibsada Google waxay helayaan dammaanad ka dhan ah shixnadaha khaldan ama soo daaha mana helayaan lacag celin ka dib soo celinta alaabta. Google wuxuu ku dhiirigeliyaa macaamiisha inay la xiriiraan ganacsadaha marka hore. Haddi jawaab la waayo laba maalmood ka dib, Google waxa ay bixisaa taageero wax iibsiga.
Xogta dhegeystaha ma heli karaan baayacmushtarka isticmaala Buy on Google. Haddii ay ku dhejiyaan boggooda xayeysiisyada Google ama pixels Analytics, ganacsatadu waxay abuuri karaan dhagaystayaal oo waxay dejin karaan ololeyaal dib u suuqgeyn ah. Ganacsatadu waxay sidoo kale abuuri karaan daawadayaal u eg si ay u ballaariyaan gaaritaankooda. Laakiin hadda, macaamiishu waxay si toos ah wax uga iibsanayaan Google. Ganacsatadu dib uma suuq geyn karaan iyaga.
Tixgeli, sidoo kale, saamaynta summada. Waayo-aragnimada oo dhan hadda waxay ku taal Google. Cilmi-baarista badeecada macaamiisha iyo wax kala iibsiga ka dib waxay ka dhacaan Google-ma aha goobta ganacsiga. Waxay u badan tahay in tani ay yarayn doonto sumcadda ganacsatada.
Intaa waxaa dheer, baayacmushtarka ka qaybqaadanaya ee soo gudbiya macluumaadka alaabta ee khaldan oo fuliya khatarta adeegga macaamiisha ee Google ka joojinta.
Raadinta goobta suuqa Google ayaa sii socota. In kasta oo ay noolayd in muddo ah, Iibka Google-ka hadda waa u diyaar dhammaan baayacmushtarka. Iyaga oo aan bixin guddiyada, ganacsatadu waxa ay kordhin karaan miisaaniyada xayaysiinta. Shopping Google waa isha dakhliga ugu sarreeya ee shirkado badan. Ku iibso Google waa tallaabo macquul ah oo xigta.
Sida xogta goobidu ay ugu wargalin karto go'aamada ganacsi ee intarneedka ee waaweyn
6 siyaabood oo aad uga qayb qaadan karto raadintaada dabiiciga ah ee shabakadaha bulshada